Taranka iyo soosaarka abuurka - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Madaxa Digest Sayniska Taranka iyo abuur abuurka
Lix nooc oo baradho ah oo cusub ayaa lagu beeray Udmurtia
Shaqaalaha Machadka Cilmi-baarista Beeraha (NIISH) ee Xarunta Cilmi-baarista Federaalka ee Udmurt ee Laanta Ural ee Akadeemiyada Sayniska ee Ruushka ayaa soo saaray lix nooc oo cusub oo baradho ah oo beddela oo loo habeeyey ...
Waa maxay sababta da'da jireed ee digriiga abuurka baradhada ay muhiim u tahay?
Da'da jireed waa fikrad muhiim u ah wax soo saarka baradhada. Waxay go'aaminaysaa marka burooyinku ka soo bixi doonaan iyo inta caleemaha ka soo bixi doona. Kani waa...
Sideed ku ogaan kartaa in baradho abuurka abuurku aanu cudur lahayn? Warshadaha abuur baradhada Ameerika way adagtahay in la dhex maro. Gobol kasta ama gobol kasta...
Sergey Banadysev, Dhakhtarka Sayniska Beeraha, Doka Gene Technologies LLC Baradhada yar-yar ee baradhada (MK) waa faraca ugu horreeya ee tuberous ee dhirta nadiifka ah ...
Vadim Makhanko, oo ah Agaasimaha Guud ee Xarunta Sayniska iyo Dhaqanka ee Baradhada iyo Dhirta ee Akademiyada Qaranka ee Sayniska ee Belarus, ayaa u sheegay weriye BelTA sababta saynisyahannada xaruntu u diideen ...
Saddex nooc oo kaabaj ah oo casri ah ayaa laga sameeyay Akademiyada Timiryazev
Saynisyahano ka tirsan Jaamacadda Beeraha ee Ruushka (Moscow Agricultural Academy oo lagu magacaabo KA Timiryazev) ayaa helay shahaadooyin xuquuqda daabacaadda saddex nooc oo cusub oo kaabajka ah, oo ah adeegga saxaafadda ee ...
Dhisme weyn oo abuur abuur ah ayaa laga bilaabayaa Kolomna oo u dhow Moscow
Magaalada Kolomna, ee Gobolka Moscow, si ay u bedesho shinni soo dejinta, Agrofirma Partner LLC waxay ka fulinaysaa mashruuc lagu ballaarinayo abuur-abuurka beeralayda-warshadaha ee jira ...
Alaabta beeritaanka baradhada ee tayada iyo caafimaadka leh ee Tang Wei's Beerta Shiinaha
Waxaan sii wadeynaa inaan daabacno agab gaar ah oo ka socda WPC (Congress-ka Baradhada Adduunka), isagoo ka warramaya abaabulka silsilad wax soo saar baradho ah oo hufan oo Shiinaha ah. Adduunka...
Bog 1 laga bilaabo 10 1 2 ... 10 Xiga